Ungayilinganisela Kanjani Iphrojekthi Yakho Yewebhu Elandelayo Martech Zone
Ungayilinganisela Kanjani Iphrojekthi Yakho Yewebhu Elandelayo
ULwesihlanu, May 28, 2010 NgeSonto, Agasti 10, 2014 Douglas Karr
Kuzokwenziwa nini ngu?
Lona ngumbuzo othi kuyangihlupha lapho ucaphuna iphrojekthi. Ungacabanga ngemuva kokwenza lokhu iminyaka ukuthi ngizokwazi ukucaphuna iphrojekthi efana nangemuva kwesandla sami. Akuyona indlela esebenza ngayo. Yonke iphrojekthi yintsha futhi izoba nezinselelo zayo. Nginephrojekthi eyodwa efike sekwedlule izinsuku ezingama-30 ngenxa yoshintsho oluncane olwenziwe yi- API ukuthi asikwazanga ukusebenza. Iklayenti lingicasukele - kufanele - ngibatshele ukuthi kuzothatha amahora ambalwa kuphela. Kwakungekhona ukuthi ngiqambe amanga, ukuthi bengingakaze ngicabange ukuthi isici esithile sizokwehliswa kusuka ku- API ebesithembele kukho. Anginazo izinsiza zokuqedela ukusebenza ngale nkinga (siyasondela, noma kunjalo!).
Ngiyenqaba ukuya kolunye uhlangothi futhi ngikhokhise amahora esikhundleni sokulinganisela kwephrojekthi, noma kunjalo. Ngicabanga ukuthi ukukhokhela amahora kukhuthaza osonkontileka ukuthi basebenzise isikhathi esengeziwe futhi basebenzise isabelomali ngokweqile. Yonke iphrojekthi engikhokhela omunye umuntu amahora kuyo ayisebenzi. Bonke sebephuzile futhi umsebenzi ungithwalise kanzima. Ngokuphambene nalokho, amaphrojekthi engikhokhele imali yephrojekthi afike ngesikhathi futhi adlula okulindelwe. Ngithanda ukweqa okulindelwe ngamakhasimende ami, futhi.
Amaphutha Amane Azoshaya Ukulinganisela Kwakho Okulandelayo:
Iphutha Lokuqala: Bala ukuthi kuzokuthatha isikhathi esingakanani ukwenza lokho iklayenti elicelile. Akulungile. Wenze iphutha lakho lokuqala futhi walinganisela lokho iklayenti elikucelile, hhayi lokho i- iklayenti lifuna empeleni. Lezi ezimbili zihlale zihlukile futhi iklayenti lizohlala lifuna okuphindwe kabili kunengxenye yentengo.
Iphutha lesibili: Awuzange ucabangele ukubambezeleka kweklayenti. Faka ukubambezeleka kwamasonto amabili kuphrojekthi ngoba umnyango wabo we-IT ngeke ukutholele ukufinyelela okudingayo. Ngihlala ngizama ukutshela amaklayenti, uma uthola u- "A" kimi ngosuku oluthile, lapho-ke ngiyakwazi ukuletha. Uma ungakwenzi, Angikwazi ukuzibophezela kunoma yiluphi usuku. Ishadi leGantt alishintshi ngomlingo, nginamanye amaklayenti nemisebenzi esele ihleliwe.
Iphutha lesithathu: Uvumele iklayenti ukuthi likucindezele ekulethweni kwangaphambilini. Awufakanga ukuphatha amaphutha nokuhlola. Iklayenti lifune ukunciphisa izindleko ngakho likutshele ukuthi ukwenze nje. Impendulo engalungile! Uma iklayenti lingakhokheli ukuphatha amaphutha nokuhlolwa, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzosebenzisa amahora amaningi kwizimbungulu nokulungiswa kwesondlo ngemuva kokuthi ubukhoma. Shaja ngayo nganoma iyiphi indlela - uzowenza lo msebenzi manje noma kamuva.
Iphutha lesine: Ukulindela kuyashintsha endleleni, amashejuli ayaphazamiseka, izinto eziza kuqala ziyashintsha, kuphakama izinkinga obungazilindelanga, abantu baphenduka…. Uzohlala isikhathi eside kakhulu kunangesikhathi ubulindele. Ungavumi kumugqa wesikhathi omfushane ngaphansi kwengcindezi evela kwiklayenti. Ukube ubunamathele kulokho owawukulindele kwasekuqaleni, wawuzokwenza kanjalo!
Muva nje, siqale inkontileka nenkampani lapho esivumelene khona ngokukhokhwa kwemali ephrojekthi bese kuba yinani eliqhubekayo lenyanga ngalinye lokulungiswa nokulungiswa. Sahlala phansi saxoxa izinhloso nokuthi yini ababeyibeka eqhulwini - futhi abakaze baxoxe ngokuxhumana nomsebenzisi, ukwakhiwa, noma enye into. Sibeke usuku olubi 'lokuya bukhoma' olwalunolaka, kepha uPat wakuqonda kahle ukuthi iphrojekthi ingahle ibe phambili kwezinye izici kunezinye. Sibethelele ukwethulwa futhi sibheke phambili ohlwini lwezithuthukisi. Okubaluleke kakhulu, sijabule sobabili.
Angishayi izilinganiso eziningi kakhulu kepha kusenzeka ngezikhathi ezithile. Eqinisweni, ngilungiselela ukubuyisa inkontileka yakamuva ngoba, ngemuva kokusebenza kumaphrojekthi ambalwa neklayenti, ngiyazi ukuthi noma iklayenti livumile izinhloso ezithile ezingacacile, ngeke bajabule ngaphandle kokuthi bathole okuphindwe kashumi kunalokho okufanele inkontileka. Ngifisa sengathi bengingabona laba bantu phambilini. Bona kudingeka ukuqasha izinsiza zabo ngehora… ukungena ekulinganisweni okususelwa kuphrojekthi nabo kungumbulali.
Ngiqala ukuthola ukuthi yini efana namaphrojekthi aphumelele esiwahambisile noma esiletha kuwo. Okuningi ngikufunde empeleni Ukuqeqeshwa kokuthengisa ngosizo lomqeqeshi wami, uMatt Nettleton. Ngithole nokuthi impumelelo enkulu yamaphrojekthi wami iqale ngaphambi kokuthi ngisayine iklayenti!
Ungakusebenzisa kanjani ukubethela isilinganiso:
Thola indlela lapho iklayenti likulindele. Ukulindela kwabo okubaluleke kakhulu. Ungathola ukuthi unonyaka wokuphothula umsebenzi. Kungani ulinganisela amaviki amabili uma ejabule ngezinyanga ezimbili? Usengawuqedela umsebenzi emasontweni ama-2 bese weqa konke okulindelwe!
Thola indlela ukuthi yini efanelekile kumakhasimende. Uma ungakwazi ukuthola ukuthi kufanelekile, thola ukuthi isabelomali siyini. Ungakwazi ukuqedela iphrojekthi futhi weqe okulindelwe ngokususelwe kuleso sabelomali? Ngemuva kwalokho kwenze. Uma ungakwazi, yiyeke.
Thola ukuthi yini inhloso yephrojekthi. Konke okungaphandle kwegoli kungaphandle futhi kungasetshenzelwa ngokuhamba kwesikhathi. Sebenzela ukusetha umgomo bese uqedela lowo mgomo. Uma inhloso ukuthola ibhulogi isebenza, bese wenza ibhulogi isebenze. Uma kungokwakha ukuhlanganiswa okuthumela i-imeyili, ikuthole ukuze uthumele i-imeyili. Uma kuzokwehlisa izindleko zokutholwa, yehlisa izindleko. Uma kungukuthuthukisa umbiko, yenza umbiko usebenze. Ubuhle buza kamuva futhi ukuhleleka kahle kungafika ngezindleko ezinkulu ngomugqa wesikhathi onolaka. Sebenzela lokho okubaluleke kakhulu.
Sebenzela emuva kusuka ku- izinga lakho lokwenza kahle. Iningi lamakhasimende ami alisebenzisi imisebenzi ephansi, bathola imali yabo ngokungishaya ukuze benze izinto ezinkulu futhi bagcwalisa ukuqedela umsebenzi olula. Ngiyawathanda lawo maklayenti futhi ngihlose ukudlula bobabili okulindelwe futhi ngibanikeze inani elingaphezulu kwalokho abakukhokhelayo. Ekupheleni kwamaphrojekthi ethu, sivame ukuba ngaphansi kwesabelomali noma ukweqa imigomo, futhi siphambili ezinhlelweni. Banginikeza igumbi elanele lokudlula abakulindele… kulula lokho.
Ngisacindezelwa ukuthi ngehlise amanani ami futhi ngiqede ngaphambi kwesikhathi, ngicabanga ukuthi yonke imenenja icabanga ukuthi yilokho inhloso yabo lapho besebenza nosonkontileka. Kubi kakhulu ukuthi yibona ababona kancane. Ngimane ngazise amaklayenti ukuthi ama-timeline amafushane nemali encane inomthelela oqondile kwikhwalithi yomsebenzi abangiqashele wona. Into enhle ngokukhokha usonkontileka omkhulu ukuthi ubaluleke ngani ukuthi uzoletha… futhi ungalindela ukuthi uzokuletha. Lapho uqhubeka nokuphungula noma ushaya osonkontileka bakho baze bafe, ungamangali lapho none wabo wake usebenze. 🙂
Ngibuye ngihlulwe ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi sokugcina ukwenzeka, inkampani yakhetha isisombululo sesikhashana abazofanele basivuselele neklayenti ngalinye. Intengo yami yayicishe iphindwe ka-1.5 izindleko, kepha ngangizoyakha ukuze baphinde basebenzise uhlelo lokusebenza namakhasimende abo ngamunye. Umphathi omkhulu wangibhuqa lapho engitshela ukuthi “wonge” malini nomunye usonkontileka (ngiphakamise usonkontileka). Amaklayenti amane kusukela manje, uzobe esekhokhe izikhathi ezingaphezu kwezingu-3 izindleko zokuqalisa. Isidumbu.
Ngimamatheke, futhi ngadlulela kwiklayenti lami elilandelayo elijabule kakhulu, eliphumelela ngokwengeziwe, futhi elinenzuzo enkulu.
Tags: ukulinganiselwa kwephrojekthiumugqa wesikhathi wephrojekthiiphrojekthi yewebhuiphrojekthi yewebhusayithiiphrojekthi yewebhusayithiUmugqa wesikhathi wephrojekthi yewebhusayithiumugqa wesikhathi wewebhusayithi
Ukwenza Icala Lokukhangisa Nge-imeyili
May 29, 2010 ku-6: 58 AM
Kusho kahle uDoug. Namanje ngisalwa nakho. Lapho ngibuzwa ukuthi ngingaqedela nini iwebhusayithi, ngifunde ukuphendula, “lokho kuya ngokuthi uphendula kanjani kukho konke engikucelayo.”
May 30, 2010 ku-3: 58 PM
Ngiyakwazisa ukungagunci kwakho, uDoug. Ngingeza omunye umkhuba omuhle kakhulu - ngikwazise iklayenti futhi libe sobala. Konke lokhu kuthathwa njengezinga elithile lokuthembela.